माग्ने बुढाले एउटा कलम किनेर उपहार दिए, यस्तो छ रहस्य « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
माग्ने बुढाले एउटा कलम किनेर उपहार दिए, यस्तो छ रहस्य
लेखक : केदार प्रसाद घिमीरे ( माग्ने बुढ़ा )
उद्योग बाणिज्य महासंघले हिजो हेटौडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा म र सितादेबी तिमल्सिनाले प्रहशन देखायौं । आफ्नो प्रस्तुती सकिनासाथ आफन्तका घरतिर कुदियो । आफ्नै ठाउँको कार्यक्रममा आउदा पनि भेटघाटमा गईएन भने आफन्तको दह्रो गुनासो सुन्नुपर्ने हुन्छ ।
हिजो पनि कार्यक्रम सकेर डुल्दै थिएँ राती १० बजेतिर पत्रकार साथी Maniraj Gautamको फोन आयो । भन्नुभयो “एक जना भाइ तपाइको खत्रा फ्यान हुनुहुदोरैछ।तपाइसंग फोटो खिच्न पाइन भनेर रोइरहनुभएको छ ,तपाइँ जतिसक्दो चांडो हेटौडा रिसोर्ट आइदिनुपर्यो “। शुरुमा त होइन होला जस्तो लाग्यो किनकि कार्यक्रम सकिएको यतिका बेर भैसक्यो कोहि किन रोएर बसोस् ? म आफ्नै हिसाबले रिसोर्ट गएँ ।
गएर निर साह ज्यु ,दिपा दिदि , जितु दाइ नरेन्द्र महर्जन दाइ ,सुमन भान्जा लगाएतसंग गफ गर्न मात्र के लागेका थियौँ मनिराज गौतमले बाहिर बाट नक् गर्नुभयो ,म बाहिर निस्किएँ ,नभन्दै एक जना १२\_१३ बर्षका भाइ रुदै रहेछन, साथमा उनका अविभाबक लगाएत थिए । मैले च्याप्प समातें र अंगालोमा कसें र नरुनका लागि अनुरोध गरें ।तर रुन बन्द भएन । भुलाउनका लागि २/४ प्रश्न सोधें । प्रश्न :- नाम के हो ? उत्तर :-Aagaman Koirala । प्रश्न :- कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ ? उत्तर :- छ कक्षामा । प्रश्न :- बुवा के काम गर्नुहुन्छ ? उत्तर :- हुप्रा चौरको गेटमा बाइक बेच्ने पसल छ । उनि आँसु पुछ्दै उत्तर दिदै थिए ।
मणिले गफ गर्दागर्दै फोटो खिचीसकेका थिए । आगमन एक चोटी पनि नहाँसी “ढिला भयो जाउँ” भनेर लिएर गए ।आज बिहान उठ्नासाथ कता कता आगमनको याद आयो ,त्यो मान्छे कतै अझै रुँदै त छैन ? संगै काठमांडू फर्कने कलाकारहरु अझै सुतिरहेका थिए । एक चोटी आगमनको घरमै गएर हाँसेको अनुहार हेरेर मात्र काठमांडू फर्किन्छु भन्ने अठोट गरेर मनिराज लाइ फोन गरेँ र सोधें “एक छिन आगमनको घर जान सकिन्छ ? ” जाउँनत जाउँ भन्ने उत्तर आएपछि किताब पसलमा एउटा कलम किनें उपहार दिनका लागि । सुत्केरी भएकी सरिता बहिनिलाइ भेट्ने भनेर सीताले गाडी लागिसकेकी थीइन , बाटोमा मनिराजको बाईक पर्खेर बसें । जाडोमा बाइक चढ्न गाह्रो भन्दै मनिराज त् अटो (टेम्पो ) पो लिएर आएछन ।
भैरबरोडमा आगमन, बुबा, आमा दाइ समेत ४ जना एक तले घरमा बस्दारहेछन। आगमनको आमाले मिठो कफी खुवाउनुभो,बाबाले चाहिँ मोटरसाइकल बेच्ने पसल देखाउनुभो,कलम उपहार दिंदै मैले “धेरै पढ्नु है”भनें , हामीले धेरै फोटोहरु खिच्यौं । आगमनको हाँसेको अनुहार देखेपछि आनन्द मान्दै हामि काठमांडू फर्क्यौं ।
फोटो तथा भिडियो श्रोत : मनिराज गौतम ।
प्रत्यक प्रहर साथ दिने नेपाल प्रहरीले यसरी दशैँ मनाए
सन्दिप योगी, ५ नंबर प्रदेश । दशैँ मनाउन लाखौँ नेपाली घर आए । बिदेशीएका, रोजगारीमा